Ukhalela elinye ithuba umfundi oxoshiwe esikoleni | News24
Ukhalela elinye ithuba umfundi oxoshiwe esikoleni
eThekwini - Ujika nelanga umfundi owaxoswa esikoleni emasontweni amathathu adlule ngecala okuthiwa laqulwa ngonyaka odlule, kubika Eyethu KZN.
Inzima impilo kulo mfundi, 16, wase-Elandskop, obefunda eKuhle Konke Secondary okungavumelekile ukudalula igama lakhe ngenxa yeminyaka yakhe.
Lo mfundi kuthiwa ngonyaka odlule sekuzobhalwa izivivinyo zokuphela konyaka wayehamba nezingane ezifunda esikoleni samabanga aphansi sesishayile isikhathi sokungena kwesikole, watshela lezi zingane ukuthi azosho kothisha ukuthi ziseliwe kanti kukhona uthisha wakulesi sikole ozwayo wabe eseyobikela uthishanhloko waseKuhle Konke.
“Ngaxoshelwa icala elaqulwa ngonyaka odlule, sengingaphandle kwesango lesikole uthishanhloko wafuna ukungishaya nokuyilapho engacosha khona itshe ngenhloso yokumshaya, kodwa ngagcina ngingakwenzanga.
“Ngiyazi ukuthi ngenza iphutha kodwa bengicela elinye ithuba lokubuyela esikoleni,” kusho yena.
Umama walo mfundi uthi wezwa ngodaba lokumiswa kwengane yakhe esikoleni kwathiwa ize nomzali kodwa wangaphumelela ngenxa yokuthi wayebamba amatoho eGoli.
OLUNYE UDABA:Uncishwe ukudla washona umfundi
Wacela elinye ilungu lomndeni ukuba liyomzwela lafika uthishanhloko engekho nokwaholela ekutheni icala liqulwe engekho.
Uthi ingane yashaywa, icala ladlula.
“Ngesonto elilandela elokuxoshwa kwayo nganikela esikoleni wangitshela ukuthi akayingeni indaba yale ngane ihlaza seyize yathatha incwadi eyigunyaza ukuthi iyofunda kwesinye isikole ayihambe,” kusho umama walo mfundi.
Uthi wazama ukuzincengela kuthishanhloko kodwa kwanhlangazimuka nomoya.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo, uScelo Khuzwayo, ucele ukuthunyelelwa imininingwane yalo mfundi.
“Sizokwenza uphenyo olunzulu ukuze sithole ukuthi ngabe yini inkinga ukuze umfundi abuyiselwe esikoleni,” kubeka uKhuzwayo.